Qaraxyo sababay Khasaare oo ka dhacay Baladweyne 24tiisaac ee ugu dambeysay – SBC
Qaraxyo sababay Khasaare oo ka dhacay Baladweyne 24tiisaac ee ugu dambeysay
Posted by Webmaster on Maarso 13, 2012 Comments
24tii saac ee aynu ka soo gudubnay magaalada Baladweyne xarunta gobolkaasi Hiiraan waxaa ka dhacay Qaraxyo xoogan oo lala eegtay ciidamada Itoobiya ee halkaasi ku sugan iyo Ciidamada Maamulka Deegaanka ka jira.
Habeenimadii xalay ilaa saaka ayaa la sheegay in qaraxyo ay ka dhaceen magaalada Baladweyne kusaasi oo lala kala eegtay Ciidamada itoobiyaanka ah iyo weliba kuwa DKMG ah.
Xalay Maqribkii oo uu dhacay qarxii ugu horeeyay ayaa waxaa lala eegtay Fariisin ay buundada nuur xabaad ku lahaayeen ciidamo ka tirsan kuwa Maamulka Baladweyne ee DKMG ah, kaasi oo sababay dhimashada 1 askari iyo dhaawac kale oo intaasi ka badan.
Saaka Barqo nimadii ayaa hadana qarax lala eegtay ciidamada dowlada Itoobiya, kaasi oo ahaa nooca dhulka lagu aaso sida ay xaqiijiyeen ilo ka agdhow ciidamada Itoobiya, waxaanu qaraxaasi ka dhacay Ex Kontrolkii hore ee Magaaladaasi
Inta la ogyahay qaraxaasi lala eegtay cidamada Itoobiya waxaa ku dhintay wiil dhalin yaro ah oo ay dishay rasaas ay qaraxa ka dib fureen ciidamada Itoobiyaanka ah.
Weerarada iyo Qaraxyada lala eeganayo dhinacyada horaantii sanadkan galay magaalada Baladweyne iyadoona ay jiraan dad lagu qabqabtay ka dib howlgalo ay ciidamada itoobiya iyo kuwa DKMG ah sameeyeen,